Uma une mncane izinwele, yini okufanele do nabo?
izinwele Izacile kuyinto silky ngakho futhi ethambile ukuthi ngisho zifane ingelosi izinwele. Ukuze abanikazi izinwele bangaba nobuhlobo naye babe kokubili isipho futhi inkinga, konke kuncike indlela lolu daba. Lapho ugunda, ukunakekelwa kanye isitayela ifaniswe ngendlela efanele, lolu hlobo izinwele intando ukubukeka omkhulu, futhi yabo abanikazi intando zwa izincomo ku bakhe ikheli.
izinwele Izacile: ukuthi benzeni, indlela yokunakekela
Ngenxa yokuthi i- izinwele esihle ku isakhiwo salo ngempela esithambile, abo kunzima kakhulu i kwekhanda ehehayo. Zingenziwa ukulawuleka ngaphezulu ngokusebenzisa ukunakekelwa efanele.
Okokuqala, kudingeka ubuke ekudleni kwakho. Abanikazi izinwele esihle udinga ukufaka ekudleni amavithamini yakho A, E, C, H, no-B amavithamini, kanye iqoqo amaminerali, okubandakanya yensimbi, zinc, i-silicon selenium, nesibabule, i-calcium, - konke lokhu kuzoqinisa izinwele kusuka ngaphakathi futhi unike kubo amandla futhi unempilo bukhanye.
Ukugeza izinwele nakho kufeza indima ebalulekile, ikakhulukazi uma kuziwa kahle izinwele. Musa ukugeza izinwele elincanyana amanzi kampompi kanzima. Ochwepheshe batusa ukususa yabo decoction chamomile, sage noma ukhova, futhi lamanzi esiphethu. Ngoba inwele esihle angahambisani imoto evamile, ikakhulukazi labo isakhiwo okuyinto-moya. Uncamela imikhiqizo ukunakekelwa kusukela umugqa professional, equkethe amaprotheni keratins. La mathuluzi bayakwazi ukunikeza izinwele zakho eliphakeme nakakhulu ngaphandle kokwenza izinwele esinzima ngokwengeziwe.
Kakhulu mncane izinwele, yini okufanele do
Kulokhu, masonto onke yakho ekulethweni uhlelo kumele zifakwe kufihla izinwele. Izinwele abe evumayo umphumela imaski nge white ubumba, amafutha yogurt, amaqanda izikhupha, futhi ekhethekile Izingxube Isekelwe omnqumo, ocolisekileyo linseed amafutha. The Mask siphelile ingaqukatha ubisi alimondi, bamboo akhiphe kakolweni lwegciwane akhiphe pectin kusuka apula, yi-keratin amino acid - konke lokhu kuba nomphumela omuhle ku izinwele enhle. Okufanele ukwenze nalezi buso? Uma kuwukuthi imaski sekulungile, kufanele bawasebenzisele ngokulandela imiyalelo, futhi uma wenza ngokwakho, udinga ukuthatha izincomo kusukela iresiphi.
izinwele Izacile, yini okufanele uyenze manje? Ngaphandle kwakho konke lokhu okungenhla kubalulekile ukukhumbula mayelana ukuxubha efanele. Kube kumelwe siqaphele ukwelashwa, ngakho ungakwazi aphonse ngaphandle ezivamile Combs eyenziwe ngepulasitiki noma lwensimbi. Izinwele kufanele zikanywe nge ibhulashi nge yemvelo bristles kuphela ngesikhathi lapho eyomile. Njalo kwezinsuku ezimbalwa kumele wenze ikhanda massage, sibonga le kungenzeka ukuthuthukisa kwegazi, futhi ngaleyo ndlela ngcono umsoco futhi ukukhula.
izinwele Izacile: ukuthi benzeni, indlela ukusika
Udinga njengokubaluleke kakhulu ukugunda izinwele izinwele. Esokuqala ukhethe kwekhanda i abanolwazi lochwepheshe, engenalo Milling zabo, njengoba lokhu ngeke nje mncane out emikhawulweni, futhi izinwele uyobheka ngisho fluidly ngaphezulu. Ukuze esihle izinwele okungukuthi akudingekile ukuba ukhethe emfushane cut, kodwa kakhulu ochwepheshe batusa ncamashi yona ekuphileni kwansuku zonke nabo kwaba kalula elawulwa. Ngaphezu haircuts iDemo izinwele zalolu hlobo, kukhona zezinwele eziningi ezahlukene. Okulingene obuphelele izinwele, ungakwazi ukuqhubeka isinyathelo cut, onikeza isithombe dynamism. Umoya izinwele izinto zokulungisa izinwele emakhanda usayizi esikhulu, kungenzeka ukuba abanike ivolumu ngaphezulu.
izinwele Izacile, yini okufanele uyenze, isitayela kanjani
Ngokuba abanjalo izinwele ngokuphelele okungalungile nolaka isitayela amasu: styler, kushisa umshini wokomisa izinwele noma uboya. Nge isakhiwo esinjalo contraindicated ngokuphelele ukusetshenziswa waxes esindayo futhi hairsprays. Kodwa ungasebenzisa namaqhinga a ladies ezincane. Uma uthayi ngobusuku obubodwa okusezingeni eliphezulu Friend Ponytail ke ekuseni saba elihle aluhlaza izinwele. Indlela ephephile kuvuleke izinwele elincanyana kukhona ngefaskamu. Kumelwe afafaze spray fixative cishe izinwele owomile, bese umoya kubo phezu ngefaskamu. Ukunqwabelanisa usulungile, uma uboya esomile.
Amaqanda Duck: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka. Ingabe ukudla amaqanda duck?
Uhudo Ukwelashwa kanye Izimpawu